स्थापनाको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेन – Himalitimes
२०७५ फाल्गुन १० ०६:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ। स्थापनाको साढे दुई वर्ष बित्दा पनि भाषा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपालको संविधानले छ वर्षभित्र भाषासम्बन्धी सिफारिस बुझाउन आयोगलाई कार्यादेश दिएको छ ।स्थापना हुँदा डा. लवदेव अवस्थी आयोगका अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकारले गत महिना आयोगको सदस्यमा उषा हमाललाई नियुक्त गरेको थियो ।
सात जना पदाधिकारी हुनुपर्ने आयोगले पूर्णता नपाउँदा धेरै काममा अप्ठेरो परेको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा यही विषयलाई चासोका साथ उठाइएको थियो ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले गहन जिम्मेवारी पाएको निकायमा दुई जनामात्र पदाधिकारीले काम गर्न कठिन हुने भन्दै आयोगलाई पूर्णता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति तिलविक्रम नेम्वाङले भाषाका कारण समस्या आउन नहुने भन्दै भाषा हरेक व्यक्तिको चिनारी भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले देशका सबै भाषाको संरक्षण हुनुपर्ने बताउँदै सबै भाषाको अस्थित्व र महत्व समान हुने भएकाले नेपालमा रहेका हरेक भाषालाई संरक्षण गर्न आयोगले काम थालेको बताउनुभयो । आयोगका सचिव लालजङ्ग चौहानले कुसुन्डा, तिलुङ र बराम भाषालाई संरक्षण गर्न कक्षा सञ्चालन गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
आयोगका उपसचिव गणेश भट्टराईले युनेस्कोले तयार पार्न लागेको विश्व भाषा एटलसका लागि आयोगले नेपालको भाषिक विवरण पठाएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा १२३ वटा भाषा छन् । तीमध्ये १०४ वटा भाषा करिव चार प्रतिशतले बोल्छन् भने १९ भाषा करिव ९६ प्रतिशतले बोल्छन् । –गोरखापत्र
भारतीय बसलाई चिनियाँ प्रमाणित नगर्दा सचिवको सरुवा गरिएको खुलाशा